CNaPS- Fiahiana ara-tsosialy Any Menabe indray ny fanentanana
Mitohy hatrany ny fampahafantarana ataon’ny Tahirim-pirenena momba ny Fiahiana ara-tsosialy na ny CNaPS.
Ho fanatanterahana ny tapaka tao amin’ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 3 mey dia notanterahina tao amin’ny faritra Menabe ny PPPS na Fandaharan’asa ho fampiroboroboana ny fiahiana ara-tsosialy ka niara-nientana ny rehetra nahitana ny avy amin’ny faritra, ny prefektiora, ny kaominina ary ny CNaPS sy ny minisiteran’ny Asa sy asam-panjakana ary ny lalàna sosialy (MTFPLS) any Menabe. Maro ny hetsika nentina nanentanana ny mpampiasa mba hanoratra ny mpiasany aty amin’ny CNaPS, ary tsy diso anjara koa ny mpiasa satria nisy ny fampahafantarana ny zon’izy ireo tamin’ny alalan’ny CNaPS mitety vohitra teny anivon’ny distrika (Ankilizato, Malaimbandy, Beroboka, Mahabo), ny tranoheva manakaiky vahoaka ho fanentanana sy famahana ny olan’ny mpiasa teny Bemanonga, tany Morondava Center ary tany Namahora. Ankoatra ireo dia natsangana tany Morondava ny “Task Force de la sécurité sociale” izay ahitana ny mpanara-maso ny asa (Inspecteur du Travail) avy amin’ny minisiteran’ny asa ary ireo mpanao fitsirihana (Contrôleurs) eo anivon’ny CNaPS. Izy ireo no niandraikitra ny fanentanana teny anivon’ny orinasa mba tsy maintsy hampiditra ny mpiasany ho mpikambana CNaPS ary hanefa ny latsakemboka mba tsy hahavery zo ny mpiasa. Nahatratra 155 ireo mpampiasa voaentana, indrindra ireo izay mbola mampiasa olona tsy ao anaty fiahiana ara-tsosialy.